UPDATE: Sidee ayey Farmaajo, Kheyre iyo Jawaari ugu heshiiyeen dhismaha golaha wasiirada? – idalenews.com
UPDATE: Sidee ayey Farmaajo, Kheyre iyo Jawaari ugu heshiiyeen dhismaha golaha wasiirada?
Muqdisho(INO)- Kulamo Villa Somalia ku dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llahi Farmaajo, Ra’isul wasaaraha magacaaban Xasan Kheyre iyo Guddoomiyaha BFS Jawaari, ayaa waxaa looga wada hadlay Hanaanka lagu soo xuli doono Golaha Wasiirada xukuumada cusub.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa IdaleNews.com u sheegay in Madaxweynaha uu ra’iisul wasaaraha u sheegay in looga baahan yahay in inta badan Wasiirada Cusub uu ka keeno bannaanka, oo ay xildhibaano ka mid noqon, waxa uuna ka biya diiday in Xukuumada cusub ay ku bataan Xildhibaanada sida caadada u ahayd xukuumadii hore.
Ra’iisul wasaaraha magacaaban Xasan Kheyre ayaa isaga soo dhaweeyay soo jeedinta Madaxweynaha Somalia, waxa uuna ku raacay in la kala qaado Golaha Wasiirada iyo Golaha Shacabka, waxa uuna cadeeyay in xubnaha Xukuumadiisa uu kala imaan doono dibadda, sid ay ilo-wareedyada u sheegeen Idale News Online.
UgU Dambeyntii, Xogta aan helnay waxa ay sidoo kale sheegeysaa in golaha wasiirada lasoo koobo, oo aanay u tiro badnaan sida kuwii hore, inkasta oo aan weli la hubin tirada rasmiga ah ee ay noqon doonaan.
C/raxmaan C/shakuur oo 5 arrimood ku soo koobay caqabadaha hor-yaala dowladda cusub
Mooshin Laga Keenay Madaxweynaha Iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland